गर्भावस्थाको क्रममा retrochorial हेमतामी
यो हुन्छ कि एक गर्भवती महिलाहरू अद्भुत महसुस गर्न सक्दछन्, तर अल्ट्रास्डस पारित गर्दै निदान पहिचान हुन्छ: गर्मीमा हेमवेटामा।
गर्भावस्थाको क्रममा, टिश्यू तहमा चोट पुर्याएकोले यो रक्तस्राव हो। आधुनिक औषधीले गर्भावस्थाको समयमा हेमटोमीका अन्य कारणहरू प्रकट गर्यो। गर्भावस्थामा एमिटमा हेमरेमा निदान को अवधिमा गर्भवतीमा गर्भवतीमा आधुनिक जिनिकुलोजीमा साझा समस्या हो। नियमका रूपमा, हेरोट्टामीको गर्भवती संवेदना प्रणालीको कारण, प्लेसेंटा र गर्भाशयको उचित पोषण प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ।
Herterus को प्रारम्भिक गर्भावस्था मा गर्भाशय को।
Hertatom मा गर्भवती मा गर्भावस्था मा गर्भावस्था मा सफलतापूर्वक उपचार गरीन्छ। निदानको कारण उपचारको एक विशेष पाठ्यक्रम लागू गर्न सम्भव छ र भ्रूणको विकासमा इष्टतम दिशामा पठाउन सम्भव छ। प्राय: एक गर्भवती महिला उनको हेमोटमाको बारेमा थाहा छैन। एक शासनको रूपमा रोगका लक्षणहरू, यसको जटिलता र यसको वितरणको स्तरमा भर पर्न।
गर्भावस्थामा retrochorial हेमतामा
retrochorial हेमतामीको गर्भावस्थामा गर्भावस्थामा, तुरून्त, भ्रुणको बाहिरी निन्दा र हजुरआमा अवधिको प्रारम्भिक चरणमा गठन गरिएको छ, उनीहरूको पूर्ववर्ती प्लेन्सेसाको आफै।
फ्लल अण्डाको पोशाकबाट छुटकाराको कारण रोग बढ्छ। सामान्यतया गर्भावस्थाको पहिलो त्रैमासिकमा देखा पर्दछ।
गर्वताको समयमा हेमेतामाको साथ चयन
कम पेटमा वर्णन गरिएको Procepp डिस्चार्जको साथ, तल्लो पेटमा दुखाइको साथ एक खैरो रंग डिस्चार्जको साथ हो। यो हुन्छ कि हेमोतामाको विकासको ठाउँ गर्भाशयको तल अवस्थित छ। यस अवस्थामा, रोगको विकासको स्पष्ट लक्षणहरू देखा पर्दैन र रगतको परिणामहरू पत्ता लगाउँदैन र एक अल्ट्रासाउन्डको माध्यमबाट मात्र फेला पार्न सकिन्छ।
हेमतामिया गर्भावस्थामा गर्भावस्थामा गर्भावस्थामा: रोगका कारणहरू
धेरै महिलाहरूले प्रश्न सोधे "कसरी हेमोटोमी गर्भवतीमा बाहिर आउँछ।" कारणहरू सेट गर्न सकिन्छ। तल सूचीबद्ध केहि तिनीहरू मध्ये केही छन्:
गर्वताको समयमा हेमतामियाको उपचार
यदि हेमटकआ निदान अनुमोदित भएमा, बिरामी ओछ्यानको शासन, साथै भावनात्मक शान्ति द्वारा तोकिएको छ। उपचारको मार्गमा शक्ति समायोजन समावेश छ। आन्तरिक क्षेत्रको पिभिलिटिकलाई उत्तेजित गर्दछ। रक्तस्राव रोक्न वा रोक्न डाक्टरले खाना, भिटामिन सी वा भिटासाल तोक्छन्।
रोमानीन्कोको टी। जी, दावी जी। एन।, स्टेशनरिनिच एल। I. I. PRONANINAIN K.। Kkraine kiraining mz, kiev
आधुनिक ओडस्टेट्रिक अभ्यास, गर्भावस्थाको गैर-परीक्षणको समस्या, डिफेरोहिटोरियल हेमट्टामा (RHG) को अभिव्यक्ति हो। यस समस्याको ईटियोलोजी र चोरीको असंख्य अध्ययनको बावजुद, उत्तरहरू फेला पार्न अझै धेरै मुद्दाहरू छन्।
यस प्रणाली समीक्षाको उद्देश्य RHG को समस्याको कभरेज हो, अधिक जटिलता, संरक्षण र गर्भावस्थाको विकासबाट बच्न।
निदान र पछिको थेरापीको विचित्रता मुख्य पार्थेनिनेटको प्रतिस्थापित गरिएको छ - माइट्स्ट्रेज र पेरिनल जटिलताहरूको विकासलाई कम गर्दछ, जुन ठूलो ओबून्ट्रिकमा जोडिएको छ, जुन ठूलो ओबून्ट्रिकमा जोडिएको छ, जुन ठूलो ओगटेलमा मिल्दछ, जुन ठूलो ओगटेलमा जोडिएको छ। सिन्ड्रोमहरु।
आधुनिक विश्व अनुसन्धानको विश्लेषण डाटाले यो अनुमान गरिएको (माइक्रोनिज्ड प्रोजेक्टेनन) गैर पेन्डिंग गर्भावस्थाको उपचारमा एक औषधि चयन हो, जुन RHG को पृष्ठभूमिको लागि अगाडि बढ्छ।
प्रारम्भिक गर्भावस्था (2 years बर्षको अनुसन्धान अनुसन्धानको प्रजनन को एक यूरोपियन समाज को एक समूह को निष्कर्ष को निष्कर्ष को लागी, वर्षाको शुरुमा रक्तस्राव संग रक्तस्राव संग रक्तस्राव संग महिलाहरु, बदमाश्यारियल र reputirminative हेमितास को गठन, II र III त्रैमासिकहरु मा भ्रुसेड ढिलाइ, प्लेन्टे प्रतियोगी को विकास।
<< p> RHG को निदानमा, रणनीति गर्भावस्थाको लागि थेरापीमा आधारित हुनुपर्दछ र यसको थप जटिलताहरू रोक्नुहोस्। माइक्रोनिज्ड प्रोजेक्टरको उच्च दक्षता गर्भावस्थाको उपचार, र अनुकूल भोलिपल्ट परिणाम प्राप्त गर्ने गर्भावस्थामा थियो, तपाईंलाई गर्भावस्थाको लामो र अनुकूल भोलिपेटल परिणामहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। साइड इफेक्टहरूको अभाव र राम्रो सहिष्णुता को अनुपस्थिति महिला मा हीजी को खतरा मा rhg को खतरा संग।
कुञ्जी शव्दहरू: retrochorial हेमटामा, क्लाउन्टेन्सी, माइक्रोसेस्ट्रॉन, ठूला ओभरडिस्ट्रिक सिन्ड्रोमहरू, Urermines।
1। Zabіцца l. नोभेरी पक्ष पाल्रोजेनेस नेभिन्सोनन्यानी वागनस्तान, Lіuvuvana Ta प्रो प्रोलाइटका: डिज। ... मन। मह विज्ञान: 1 .. 1. 1 / राष्ट्रिय पत्राचार संयुक्त। बारेमा।। बोग्मोल्टी। - K., 200 2007. - 19 p पृ।
2। Lolovova l .. Detrohanial हेमत्मास संग गर्भावस्था को धम्की को उपचार को उपचार को लागी एक एकीकृत दृष्टिकोण: विघटन। ... मन। मह विज्ञान: 1 .. 1. 1 / सोलिओभवाभा लिलिया डेलिया डेमरवाना [सुरक्षा स्थान: सामरा राज्य मेडिकल विश्वविद्यालय]। - सासु, 201 2014. - 1 1900s।
कुनै पनि महिलाको लागि, गर्भावस्था मुख्य घटना हो जसमा सब भन्दा सुन्दर यौन प्रतिनिधिहरूले खोज्छन्, बाल्यकालदेखि नै सुरू गर्दै। घटनाहरूको आगामी घटनाको आनन्द वर्णन गर्न केवल असम्भव छ। जे होस्, त्यहाँ केहि समस्याहरू छन् जुन यसलाई ओझेलमा पार्न सक्छ। तिनीहरू मध्ये एक एक रेट्रोचरानिक हेमतामा छ।
<< दुर्भाग्यवस, हाम्रो समयमा, हाम्रो समयमा यो हुन्छ कि बच्चाको हाच गर्दै तनावपूर्ण परिस्थिति बिना बच्चाको हाच गर्दै। र उनीहरूले धेरै जानकार मानिसहरूलाई सल्लाह दिएझैं कुनै पनि चरित्रको चिन्तित संकेतहरूको उपस्थितिमा डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नु राम्रो हुन्छ। यो एक बंगंग ट्रिफल्स हुनु राम्रो होला, तर मात्र तपाईं सम्पूर्ण प्रक्रिया नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ र स्वयंलाई मात्र सुरक्षित छैन, तर आफ्नो बच्चा पनि।
<< p> गर्भावस्थामा, एक महिलाको शरीरको हार्मोनल पुनर्संररक देखा पर्दछ। तर यो सबै होइन - मुख्य शरीरले पनि परिवर्तन हुँदैछ, तर जुन अझ महत्त्वपूर्ण छ, ऊ कमजोर हुन्छ। यो स्वाभाविक रूपमा देखा पर्दछ: गर्भाशय आकारमा बढ्छ, यो यसको भित्ताहरू मोड्नु हुन्छ। अन्तिम रूपले मेमोमोफोसको क्रममा, त्यहाँधडीको जोखिम हो, जसलाई चिकित्सा भाषामा हेमट्टामा भनिन्छ।
यसिस्टसमा यस्तो घटना यति विरलै र गर्भावस्थाको शुरुको अवधिमा देखा पर्दैन। यो पहिलो त्रैमासिकमा छ कि भ्रुण अण्डाको टुक्राहरूको टुक्रा बढ्ने सम्भावना बढेको छ। गर्भावस्थाको क्रममा retrochoratial हेमताटोले यसलाई अवरोधको साथ अन्त्य गर्न सक्दछ।
त्यसोभए, भविष्यका आमाहरू आफ्नो शरीरको कुरा सुन्न र समयमै चिकित्सा उपचार खोज्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्।
Phorewoe के हो?
बाहिर पत्ता लगाउनु अघि, गर्भानी हेमवेमामा देखा पर्यो, यो रोगको शब्दावलीमा बुझ्नु पर्छ। भ्रुणासले द्रुत स्टोस्ट्रिन रेटानिकी खोल घेर्दछ, जुन गर्भाशयको उपपियमसँग जडान गर्दै, केही समय पछि। नतिजाको रूपमा, आमाको भाँडाहरू र भ्रुणहरू पूर्ण छन्। एक नियमको रूपमा, यो 1 16 हप्ता पछि पूर्ण रूपमा गठन हुन्छ।
किनकि यो माथि उल्लेख गरिएको थियो, गर्भावस्था जहिले पनि सहज रूपमा जान्छ, र फल अण्डा पृथक हुन सक्छ, जुन क्यापिलरीहरूको प्रक्षेपणमा छुट्टिन्छ। नतिजा स्वरूप, गर्भाशय र फलको पर्खाल बीचको रत्लोपनाको रगत संयोजन गठन हुन्छ जसलाई वैज्ञानिक भाषाले बोलाइन्छ। तसर्थ, यो मूल रूपमा गर्भावस्था को प्रारम्भिक अवधि मा हुन्छ, जब प्लेसेन्टा अझै गठन भएको छैन।
चिकित्सा अभ्यासमा, त्यहाँ एक पोनीमोनन पनि एक अनुभवी हेटाटोमीको रूपमा पनि एक फैलिएको छ। यो कुनै पनि औषधि हस्तक्षेप बिना स्वतन्त्र अवशोषणको परिणाम स्वरूप हुन्छ। यस सन्दर्भमा यस्तो अवधारणा एक अर्कासँग भ्रमित हुनु हुँदैन।
retrochorial Progholabea एक सुरू फारममा हुन सक्छ, जुन 1 16 हप्ता भन्दा बढीको सर्तमा अवलोकन गर्न सकिन्छ। यस अवस्थामा यसको फलले फलहरू आफैंले सिधा प्लेन्सेसाबाट सिधा फल्न थाल्छ। एकै साथ जोखिम र फलले नकारात्मक प्रभावमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।
रक्तस्राव पत्ता लगाउँदा हीतामी कसरी गर्भावस्थाको क्रममा आउँछ। यो प्राय: प्रारम्भिक चरणमा भ्रुण अण्डाको एक ढीला फिटको साथ हुन्छ। त्यो हो, खालीपन बाहिरी खोल र आन्तरिक अर्थमा लेखिएको आन्तरिक तातो तहको बीचमा गठन हुन्छ जुन गहन रक्त संचारको कारण रगतले भरिन्छ।
गर्भाशयमा हेमतामा एक महिला र बच्चाको स्वास्थ्यको जीवन दुबैको लागि सम्भावित जोखिम हो। यदि भविष्यका आमाहरूसँग त्यस्तो निदान छ भने, यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि यसको के आदरणीय के हो भनेर निर्धारण गर्ने नतिजा कस्तो हुन्छ र नतिजा कस्तो भयो?
oursatom को अवधारणा रक्त संचय, वजनकालीन टिश्युको चोट वा रक्तक्षेपणको अखण्डका विकारहरू उत्पन्न गर्दछ। गर्भाशयमा हेमतामी यस शरीरमा रक्तस्राव हो।
retrochorial हेमट्टामा रोग को एक प्रकाश रूप हो, जो सामान्यतया विशेष लक्षणहरु द्वारा विशेषता को लागी छैन, प्राय: ध्यान दिएर अक्सर कुनै ध्यान दिए। गर्भावस्थाको क्रममा retrochoratial हेमताटोले लौणनबाट भेट्ट अण्डाको टुक्रा टुक्रा गर्दछ।
<< p मतदान हुने ठाउँ रगतले भरियो, जसको कारणले बच्चालाई तानिको अवधिमा द्वितीय हेमोररेटलाई जनाएको छ।
1 16 वर्षीय भ्रुण उपकरण सम्पन्न भयो, प्लेसेन्टको गठनको चरण पूरा भयो, त्यसैले यो उपस्थिति गर्भावस्थामा गर्वको समयमा गर्भवती भनिन्छ।
स्पष्टता गर्न, गर्भवती महिलामा अनुभवी महिलाको रूपमा त्यस्तो शब्दको अस्तित्वको बारेमा त्यस्तो कल्पना गर्न उपयोगी छ।
<< p> यो एक विचार छ र व्यवस्थित रक्तस्रावको रूपमा यस्तो शब्दको बारेमा उपयोगी छ। यो बिरामीको सुरूवात गरिएको रूप हो, जब प्लेसेन्टाबाट भहाँ पुगेको छेउको चरण पहिल्यै आइपुगेको छ। यस मामलामा, जोखिमको डिग्री र प्रतिकूल परिणामहरू बिरूद्ध केही परिणामहरू र बच्चाको बिरूद्ध बढ्छ।
अल्ट्रासाउन्ड परीक्षा थियौ कि गर्भाशयको हेट्रारेज को निगरानी निदान को एक मात्र तरीका हो। आखिर, सधैं सचेत नहुने लक्षणहरू प्रकट गरिएको लक्षणको लागि भेटिन्छ। यस प्रक्रियाको आधारमा, रोगको गम्भीरता निर्धारण गर्न सम्भव छ, र सही उपचार चयन गर्नुहोस्। रेट्रोचटोरियल हेमोतामीले बच्चा जन्माएको समयमा, पहिलो त्रैमासिकमा भेट्टाए र पहिलो त्रैमासिकमा फेला पर्यो, तेस्रो त्रैमासिकले देखाईनेछ।
मे 1-16-1-16, 201 2016 किभरमा हर्मोरोनोनानियन हार्मोनन सम्मेलनमा - अटोबरिटिक विषयहरूमा रिपोर्टहरू, जुन हामी हाम्रो पृष्ठहरूमा हाइलाइट गर्न चाहन्छौं। उसको बोलीमा, भेरा ivanovna Pirogova,d।, प्राचीन, फर्ड एटेटेक्ट विभागका प्रमुख फोर्ड एनोभाइवलजी विभागका प्रमुखले गर्भावस्थाका क्लिनिकल र प्याराक्निक पक्षको बारेमा भनिएको थियो, जुन एक rectrothoral हेनिकनटा द्वारा जटिल थियो।
पूर्वी यूरोप »№ ( 0) 20100) को अतिरिक्त - अस्पष्ट गर्भावस्था को एक महत्वपूर्ण पक्षहरु prochantance को पहिलो त्रैमासिक को उपस्थिति छैन गर्भावस्थाका क्लिनिकल र प्याराक्लोनिक पक्षहरू, जसको बदमाहिक हेमतमिया 1 15 -16 द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका र केही युरोपेली देशहरूमा retroharial हेटामास द्वारा जटिल छन्। उचित पूर्ण प्रत्याशा retroactrial हेमतामाको विकासलाई घटाउनुहोस्।
रिपरोथियोहिन हेमट्टामासँग सम्बन्धित क्लिनिकका क्लिनिकको सुविधाहरू प्रस्तुत गर्दछ।
अधिक-इम्माब्रायिक संरचना र भ्रुण क्रान्तिकारी गुणहरू र भ्रुणको दर्जात्मक हेमोटोको उपस्थितिमा RHG र असह्यको खतरा नजिकको परिणाम र परिणामहरू थिए। गर्भावस्थाको द्रुत र ट्रान्सकुसिक एसिडको तयारी प्रयोग गरेर गर्भावस्थाको व्यापक उपचारको प्रयोग गर्दा गर्भावस्थाबाट र यो विधिको क्लिनिकल प्रभावकारिता प्रमाणित गर्दछ जसले गर्भावस्थाको लामो समयसम्म प्रचार गर्दछ।
Anberharial हेमटामी, बदलामी हेस्मामा, एक ट्रान्कर रेफरहोल्फोल्शर हेमट्टामाको 1 %% ले रक्तस्रावमा 1 %% ले रक्तस्रावको 1 %% ले रक्तस्रावको 1 18% को 1 18% को 1 %% जत्भावस्थाको 1 %% जत्भावस्थामा रक्तक्षेपणको 1 %% ले रक्तस्रावको 1 18% 322 (.32..3%) महिला, गर्भावस्था भूकथाको अवरोधको लागि जटिल थियो र एक गर्भपतनको शुरुवात गतिको लागि, बदमाशमा एन्ड्राइज़ाजनक विशेषताहरूको कारण Homatomas FIG मा प्रस्तुत गरिन्छ। 1-- [
गर्भावस्थाको प्रारम्भिक अवधिमा गर्भाशयमा, भ्रुण विकास भइरहेको छ। यसले निषेचित अण्डाको पातलो फिल्मको रक्षा गर्दछ - लियोनको पोशाकमा, जुन सामान्य विकासमा प्लेसेन्टामा रूपान्तरण हुन्छ।
यदि यस अवधिमा यदि मूल्य निर्धारण विकास विफलता हो भने, भ्रुण विकास विफलता यसको पोशाक फिल्मबाट अलग गरिएको छ। निपटान ठाउँ रगतले भरिएको छ। यो रोगलोलता गर्भावस्थाको क्रममा एक रिट्रोकुलर हेमटाटोमी भनिन्छ। यसले भ्रूण विकास रोक्न र नोक्सान निम्त्याउन सक्छ।
एक रेट्रोचर्टियल हेमताटो
के हो<< p> हीटमेमालाई गर्भावस्थाको क्रममा अल्ट्रासाउन्ड अनुसन्धान अनुमति दिन्छ। अल्ट्रासाउन्ड डिलिस्टिक उपकरण द्वारा बनाईएको फोटोमा, विशेषता डिमारिंग राम्ररी कम छ, साथै भ्रुण अण्डाको विलम्बन।
retroharial हेमत्टोमिन -7-7 हप्ता र महिला गर्भवती केटीहरू छ भने, -7-7 हप्ता र महिला गर्लिएका केसहरूको लागि एक महान गर्भावस्थाको साथ विकास हुन्छ। यो प्यास्टोलोजीलाई पेटको ज्वालामा पेटमा पेटको ज्वालामा खम्बामा खम्बामा खम्बामा तानिन्छ, खैरो वा स्कार्लेट स्रावमा। यी लक्षणहरू फेला पार्दा, एक महिला तुरुन्तै डाक्टरको सल्लाह लिनु पर्छ।
दुर्भाग्यवस, धेरै गर्भवती महिलाहरूले गर्भावस्थाबाट केहि अप्रिय क्षणहरूसँग व्यवहार गर्नुपर्नेछ। गर्भावस्थाको क्रममा तिनीहरू र retrochorachial हेमटाटोमी, जुन बच्चाको सामान्य उपकरणको लागि वास्तविक खतरा हो।
के एक अनविल र डरलाग्दो नाम पछाडि लुकाइएको छ जुन पछाडिको नाम
हेमतामी, सामान्यतया, यो एक रोल र कुनै पनि मानव शरीरको तरल पदार्थ हो जुन मानव शरीरको स्थानीय निकायमा सञ्चित गरिएको छ।
retrochorialको मतलब कि किबूनको अण्डा शेल द्वारा रगत वेशो हो। यो पहिलो तीन महिनामा प्लेसेन्टाको भ्रुण शरीरको भित्र परिणत नभएसम्म पहिलो तीन महिनामा परिणत हुने हुन सक्छ।
यस रोगविज्ञानले गर्भाशयको भित्तासँग पोशाक जडान गर्दै गरेको सुझाव दिन्छ, र यसको मतलब यसको साकार सुरु हुन्छ।
गर्भावस्थाको क्रममा retrochorial हेमटामाले स .्केत गर्न थाले कि रगतले रगतले भरिपूर्ण अण्डाको बीचमा शून्यता शुरू भयो, जुन रगतले भरिएको थियो।
लक्षणहरू जसको लागि तपाईं एक खतरनाक समस्याको सुरूवात निर्धारित गर्न सक्नुहुनेछ
retrochoratial हेमताटो प्रारम्भिक सर्तमा गर्भावस्थामा गर्भावस्थाको बखत दर्दनाक संवेदनाहरूको उपस्थितिलाई संकेत गर्दछ, पीडा कोरिएको छ। कहिलेकाँही एउटा लेनले चोट पुर्याउन सक्छ, तर यस्तो भावना, वास्तवमा यो पीडाले फिर्ता दिन्छ।
<< p> दोस्रो स shive ्केत - अधिक प्राय: अक्सर, असारकहरू देखा पर्दछ, कम प्राय: मध्यम रक्तस्राव हुन्छ। चयनको उपस्थितिमा, एकले समस्याको आकारको न्याय गर्न सक्दछ र यसको खतराको डिग्री:
सामान्यतया गर्भवती महिलाको ठूलो प्रतिशत अंडरवियरमा जैविक तरल पदार्थको ट्रेसहरू अवलोकन नगर्नुहोस्। जे होस्, मासिक धर्म र / वा लुम्बरमा डाक्टरलाई सचेत र बलपूर्वक डाक्टरलाई भेट्न सावधान हुनुपर्दछ।
retrohohoric हेमोतामाको प्रवाह आयोजित गर्न सकिन्छ, सामान्यतया, साना लक्षणहरूको अभिव्यक्ति बिना। खतरामा, रगतको परीक्षणको नतीजा अनुसार एक महिलालाई केवल योजनाबद्ध अल्ट्रासाउन्डमा फेला पार्न सकिन्छ: डाक्टरलाई चेतावनी दिन बाध्य छ र यदि प्रोटीनको स्तर रक्तप्रावको लागि जिम्मेवार छ भने।
<< p> कार्यक्रममा जुन प्रारम्भिक समयमा गर्भावस्थामात्र हेरोटामा इजेक्शन हुँदै जान्छ, यसको मतलब गर्भाशयको शीर्षमा मात्र निर्धारण गर्न सम्भव छ।
रक्तवर (अंडरवियर) मा पर्याप्त र स्मीयर) एक प्रारम्भिक चरण को बोल्दछ। रगत गुहामा जम्मा गर्न जारी गर्न सक्दछ, जुन आकारमा बढ्नेछ, र त्यसपछि चयन अधिक हुनेछ।
रोग विज्ञानको कारणहरू छन्
प्रोजेक्टरेटोन (UREIMIMES) को उपयोगिताको अध्ययनबाट 43 43 बिरामीहरूको लागि रूढीविद्स (RHG) द्वारा जटिलताबाट जटिल थियो। गर्भावस्था र RHG द्वारा जटिल गर्भावस्था अवरोधको उपचारमा UREASIA र हेसोस्टिक थेरापीको प्रयोगको उच्च दक्षता देखाइएको छ। साइड इफेक्टको अनुपस्थिति, राम्रो सहिष्णुता गर्भपतन खतरामा पर्ने खतरा उभिएर गर्भवती RHG ले हराउने काम प्रयोग गर्ने सम्भावनाहरू विस्तार गर्दछ।
असुविधाजनक गर्भावस्था आधुनिक प्रभोगशास्त्रको मुख्य समस्या हो। पैटरतामको फ्रिक्वेन्सी 10 देखि 35 35% prownsters को संख्याको गर्भवती महिलाको संख्याको हुन्छ र [2,]] कम गर्न खोज्दैनौं।
प्राय: गर्भावस्थाको अन्तराल विकासको खतरा पहिलो त्रैमासिकमा बढ्दै जान्छ र रक्तस्रावको साथ हुन्छ।
गैर-विशिष्टताको समयमा रक्तस्रावको एक व्यक्ति एक उपस्थितिता (SGG) हो जुन एक विशिष्ट रोगीजिकल अवस्था हो (सामान्यतया पहिलो त्रैमासिकमा) जुन परिणामस्वरूप विकसित हुन्छ, जुन परिणामको रूपमा विकसित हुन्छ आनुवंशिक वेग अण्डाको साथ एक बिभिन्न शेल अण्डाबाट कोर्राल प्लेटको आंशिक प्लेटको अंशको र subcharial अन्तरिक्षमा रगत क्लस्टर (हेमट्टामा)।
SGG को गठन को कारण मा कुनै सहमति छैन। उत्पत्तिमा, Soggise स्वत: थ्रोमोबोपोलिक विकारहरूको भूमिका स्थापना गर्दछ, जसमा पहिले नै अवस्थित एन्डोपोरिन, एक्स्ट्राइग्राफेन्टिक रोगविज्ञान र संक्रमणहरूको पृष्ठभूमिमा खडा हुन्छ।
मा सामान्यतया राम्रोसँग संक्रमित समूहमा यौन समर्थित संक्रमण समावेश गर्दछ, जुन प्रत्येक वर्ष बढ्दछ।
रूसी संघको तथ्या .्क अनुसार सहरी केटीहरूको पहिलो यौन सम्बन्धको अनुभव 1 15..5 ± 2.4 बर्षको उमेरमा पुगेको छ ।
किशोरावस्थामा भग्नावशेष प्रजातिहरूको अष्ट्रेस भनेको रोगको पाठ्यक्रम प्राथमिक - पुरानो, फोक्सोको छ। यो तथ्यबाट प्रतिरक्षा र होमोनोल प्रणाली अपूर्ण असिद्ध छ भन्ने तथ्यले वर्णन गरेको छ।
त्यसैले, अव्यक्त र दीर्घकालीन बगिरहेको ऊरोहित संक्रमणले एउटा सानो पेल्विस, बिग्रिएको मासिक धर्मको गठनको गठन गर्दछ, र त्यसैले
ट्रान्सतान्स र कुनै पनि इन्ट्राघाउरिक हस्तक्षेपले शरीरको भत्ठो प्रतिक्रियाको रूपमा ट्रेस छोड्दछ, जुन एक स्वत: जमिन प्रकृति छ। प्रारम्भिक चरणमा गर्भावस्था रोक्न, डाक्टरहरूले ढिलो, समयपूर्व जन्म रोकथाम र एक महिलालाई गर्भावस्था व्यक्त गर्न मात्र नभई एक स्वस्थ बच्चालाई जन्म दिन सम्भव बनाउँदछन् तर एक स्वस्थ बच्चालाई जन्म दिन सक्छन्।
उपचार एसएचजी अधिकतर हेमतामाको आकार 500 मिलीएलको आकार भन्दा बढी छैन भने यो अनुकूल छ, र महिलाको युग 35 35 बर्ष भन्दा बढी उमेरको छैन। Shg पूर्ण रूपमा अवशोषित छ, डिसेस्टअल खोल जहाजहरूमा रगत प्रवाह पुनःस्थापित हुन्छ, गर्भावस्था सामान्य रूपमा विकसित हुन्छ। लेखकहरूको एक अंशले उल्ठाशयको एक अंशलाई गर्भावस्था बोक्दा केवल प्रभावकारी माध्यमहरू (बचहास्टन) केवल प्रभावकारी रूपमा प्रभावकारी रूपमा प्रभावकारी प्रोजेक्टेन्सिंग भन्दा बढीमा बढी हुँदैन, र जब एक लघुनियसेटी 1 18..7% प्राप्त गर्दा (]] ।
अध्ययनको उद्देश्य प्रोस्पोभेन्ट्रॉनिक हेमत्तामा (RHG) द्वारा जटिल महिलाको लागि संरक्षकको क्लिनिकल क्षमताको अध्ययन हो।
अस्पतालमा वर्षको लागि 1 158 गर्भवती महिला गर्भपातको धम्कीसहित व्यवहार गरिएको थियो। यी मध्ये, 55 55 % 35%) बिरामीहरू RHG द्वारा पहिचान गरियो, जसले रक्तस्रावमा पुर्यायो।
अध्ययनमा wh 43 महिला समावेश गरिएको छ जसलाई RHG को गठन द्वारा जटिलता छ। यी मध्ये, एक गर्भावस्था जुम्ल्याहा, अर्को छ, सहायक प्रजनन प्रकृतिहरू लागू गरेपछि (ITI)। महिलाको युग 1 to देखि 400 बर्षदेखि थियो, जबकि2%%%) महिला 1 years बर्षदेखि 300 बर्षदेखि उमेरका 35 35 बर्ष उमेरका थिए।
एक्स्टग्नेन्टेन्टिक पाट्टीको संरचनामा, संक्रामक रोगहरूले एक महत्त्वपूर्ण स्थानमा उल्लेखी: तीव्र श्वासप्रवाहको भाइरल संक्रमणहरू, जीतेना, जीर्ण pyeloishiries - 322 (.4 74..4%) महिला।
मामलाेटिक रोगहरूबाट शावल शाकाहारी डाकूज्य ट्रायल ट्र्याक, एनेमिया, नेपालमा 20 (% 46%) मा।
जान्नेजिक ईतिहासको अध्ययनले मासिक धर्म चक्रको अध्ययनलाई देखाएको छ कि त्यहाँ बाँकी 1 16 (% 37%) थिए, बाँकी, पीडाविहीन, मध्यम मासिक धर्म थियो।
कार्यान्वयन सिस्टहरू महिलाको 1 %%) मा पत्ता लगाइयो (1 %%) जिज्ञासाको अपरेशन्सहरू (- - Ectopic गर्भावस्थाको बारेमा 1 - दाँया अभिव्यक्तिहरूको बारेमा। Cytsoma)।
महिलाहरू 1 13 (%%%) थिए र ती मध्ये, 1 13 (% 75%) थिए। अस्पतालमा महिला परामर्शका डाक्टरहरूको निर्देशनमा,2(53%) बिरामीहरूलाई स्वतन्त्रता दिइयो, स्वतन्त्र रूपमा - 1 %%) चाँडै, चाँडै 12 (2 %%)। 1 %%) महिला महिला परामर्शमा दर्ता गरिएको थियो।
जब जननांग पर्चाबाट रक्तस्रावको बिरूद्ध गुनासो 1 13 (.99। %% बिरामीहरू बुझाइन्छ, पेटको तल र तल्लो पछाडि दुखाइ तान्दै - (%%), दुई लक्षणहरूको संयोजनमा - 22 (% 1%)। अन्डनेसबाट प्रवेशमा, रक्तस्रावमा देखा पर्ने 1 13 (% 0%) महिलाहरूलाई तुरुन्तै चिकित्सा सहायताका लागि अपील गरिएको थिएन, र कहिले रक्तक्षेपण तीव्र भयो। प्राप्त गरिएको गर्भवती महिलाको गर्भावस्थाको फरक फरक समय थियो, तर प्राय: गर्भावस्थाको अवधि -2(56%), -10-1%) गर्भवती महिलाहरूको 12 (2 %%) गर्भावस्थाको अवधि।